Etu ị ga - esi melite LG G2 gị na nke kacha ọhụrụ dị na European firmware | Gam akporosis
Taa achọrọ m ịkọwara gị nzọụkwụ site na nzọụkwụ, ụzọ melite LG G2 anyị, naanị mba nlereanya D802na Kacha ọhụrụ mbụ European femụwe si LG na onye ọrụ n'efu. The femụwe akpan akpan bụ D80220H na anyị nwere nsụgharị abụọ dị, otu nke na-echekwa Root na Iweghachite gbanwetụrụ, na nke abụọ na wepu ma Root na Iweghachite na-ahapu ya idi ocha na njikere maka a kwere omume update site OTA ọhụrụ version of A gam akporo 5.0 nke izizi LG Lollipop ozugbo a na-etinye ya n'ime otu ọnwa ma ọ bụ atọ.
Usoro m ga-akọwa ebe a bụ nke kachasị mfe ebe ọ bụ na ọ bụ a KDZ mbụ si Open Europe mbipute D80220H, gbanwee na usoro ZIP maka mfe echichi si gbanwetụrụ Recovery, Mụ onwe m etinyewo ya nke ọma site na TWRP Recovery 2.8.1.1 si na Rom Optimus RS 1.4.
Tupu ịga n'ihu na nkuzi a bara uru, ị kwesịrị ịma nke a nke a dị irè maka ụdị LG G2 D802 a maara dị ka ihe nlereanya mba ụwa. Na ntụgharị m na-akọwa ihe ọ ga-abụ dị mkpa ịmalite site na Rom Stock ihe ọ bụla isi gị, JB ma ọ bụ Kit Kat, na-ezere ime ya kpọmkwem site na AOSP ROM ma ọ bụ na-abụghị Stock ROM.
1 Ihe ndị dị mkpa tupu iwee ROM a
2 Chọrọ faịlụ
3 LG Open Europe D80220H mbụ usoro ngwa ngwa ngwa ngwa
Ihe ndị dị mkpa tupu iwee ROM a
LG G2 nlereanya D802 naanị na naanị.
Ọnụ gbanyere mkpọrọgwụ na-onwunwe nke gbanwetụrụ Recovery.
Iweghachite emelitere na nke kachasị ọhụrụ ya.
EFS nchekwa ndabere na nandroid ndabere.
Batrị boro 100 x 100.
USB debugging nyeere site na ntọala.
Ndabere nke ngwa na data na anyị chọrọ ịdebe ebe ọ bụ na usoro ọkụ ahụ, anyị ga-ehichapụ ihe niile, belụsọ ebe nchekwa nke LG G2.
Anyị nwere faịlụ ZIP abụọ dị na mkpofu anyị, otu maka hapụ ya kpam kpam site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-enweghị mgbọrọgwụ ma ọ bụ gbanwetụrụ mgbake, Echere m na mgbake mbụ site na LG ma ọ bụ Iweghachite na anyị nwere ike ibudata site ebe a.
ZIP nke abụọ maka ndị niile chọrọ kwalite nke a kacha ọhụrụ na Europe firmware, onye na-enweghị ọrụ mana cna-echekwa mgbake anyị gbanwere na idebe ikikere mgbọrọgwụ. Nke anyị nwere ike ibudata site ebe a.
Ozugbo anyị ahọpụtara ZIP na-amasị anyị, anyị ga-enwe naanị detuo ya na ebe nchekwa nke LG G2 imelite na reboot na ọnọdụ Iweghachite iji soro ndị a D80220H ntinye ngwa ngwa na usoro na-egbu maramara:
LG Open Europe D80220H mbụ usoro ngwa ngwa ngwa ngwa
Site na gbanwetụrụ Mgbake anyị ga-eso usoro ndị a dị mfe:
Anyị na-aga nhọrọ Hichapụ ma họrọ ihe niile ewezuga ebe nchekwa dị na LG G2 ma ọ bụ SDcard dị n’ime.
Anyị na-aga nhọrọ wụnye na anyị na-agagharị n'okporo ụzọ ebe anyị na-edegharị ihe Mepee Europe D80220H firmware ZIP.
Anyị na-emegharị ụlọ mmanya iji mepụta nhọrọ a rịọrọ ma anyi jiri ndidi chere zip ka emechaa na-egbu maramara.
N'ikpeazụ, anyị họrọ nhọrọ Reboot Systen ugbu a ma anyị chere ruo mgbe anyị malitegharia LG G2 nlereanya D802 -egosi anyị ọhụrụ na ọhụrụ femụwe Open Europe D80220H.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Etu ị ga - esi melite LG G2 gị na nke izizi mbụ nke European firmware D80220H
Ndewo Francisco, amaara m na ọ nweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na post ahụ, mana ka ọ na-erule oge nkuzi na "Etu esi ewunye mgbake gbanwere na mgbọrọgwụ na Bq Aquaris E6" ga-enyere m aka nke ukwuu, ekele n'ọdịnihu, ekele
Maka d 805 nhọrọ a adịghị? Iji kwadebe ya maka lollipop ahụ? Ihe ọzọ m nwere naanị g2 m ka ọ gbanwere mana ọ na-atụ m ụjọ n'ụzọ nkịtị .. nke ịme ihe ọzọ nke ga-abụ ihe mgbake, kedu ka m ga-esi mee ya n'enweghị nsogbu Achọrọ m itinye roms mana naanị m nwere mgbọrọgwụ, kedụ ihe ọzọ m ga-achọ?
Ogbodo 94226 dijo
«N’aka nke ya, m kọwara na ọ ga-adị mkpa ibido site na Rom Stock ... ´´ kedu ihe ị pụtara n’ihe a? Daalụ.
Ndewo Francisco, ka m kọwaa, budata rom a obere oge gara aga na m nwere ya echekwara na pc m, okwu a bụ na ekpebiri m iji ya, ọ nwere mmelite twrp kachasị ọhụrụ wee si na claudyg3 rom, eziokwu ahụ bụ na ebe ibudatara ya oge gara aga echetaghị m gịnị ka ị na-ekwu na post a maka ịwụnye ya ma ọ bụrụ na ị nwere rom rom, mgbe ahụ, m wụnye ya ma ugbu a enwere m megabrick. : - \_
Mkpụrụ ndụ ahụ na-agbanye ya na-etinye akara LG ma laghachi ma malitegharia ma kwughachi otu okirikiri ahụ, ọ nweghị mgbake ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ nke ọ nwere na mgbe m gbalịrị itinye ya na ọnọdụ dowloader ọ naghị abanye ya na-atụba m. ufodu njehie ma na enyo aga na-acha oji mana nwa okwesiri m enyemaka amaghi m ihe m ga eme !!
Javier, a ka m nọ ya, enwere m ike iji ekwentị gị dozie nsogbu gị
Biko nwanne m, a na-akwado rom European a na 4g?
Ana m agwa gị Francisco na ebudatara m ya na ihe niile dị mma mana ekwentị na-anọ na lg logo, biko ị nwere ike idozi ya n'ihi na m nwere mmasị n'ihi na achọrọ m ka 4g network pụta ebe ọ bụ na nke m ọ nweghị ya, ya bụ nke na-eweta rom nke alaeze ndị Arab. imeela nnọọ ma na-eche
Ndewo, ụtụtụ ọma niile, enwere m ajụjụ, kedu ụdị sw bụ nke ọhụrụ, d80220h ma ọ bụ d0b nke lg g80220, bụ na ọ gwụchala ma m nwetara ekwentị ma wụnye h, m Ọ ga-amasị m ịmara nke kachasị ọhụrụ, ọ bụrụ na m ga-alaghachi b, daalụ maka azịza gị.
Zaghachi lolek krochasnikov
Usoro nke mkpụrụedemede na-enye gị azịza, H dị ọhụụ karịa B.
Cicret Mgbaaka, mgbaaka nke ọdịnihu ma ọ bụ gam akporo Fake ọzọ?